भैंसीगोठमा प्रहरी, सुरक्षा कसरी ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार भैंसीगोठमा प्रहरी, सुरक्षा कसरी ?
१ आश्विन २०७६, बुधबार ०९:२३
जीर्ण र कच्ची भवन। पानी पर्दा चुहिन्छ। घाम लागे गर्मी हुन्छ। थुनुवा राख्ने ठाउँ छैन। कतिपय प्रहरी त रातभर अन्तै बास बस्छन्। कतै ठाउँ अभावमा पालो गरेर सुत्छन्। नागरिक सुरक्षाका लागि सुदूरपश्चिममा खटिएका प्रहरीले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्या हो यो।
तस्वीर : आन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक
यस्तो समस्या सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश प्रहरी कार्यालयले भोग्दै आएका छन्। नागरिकको सुरक्षामा खटिनुपर्ने प्रहरीलाई कार्यालयको चिन्ता देखिन्छ। अभियुक्त ल्याउँदा त समस्या थपिन्छ।यो खबर आजको आन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
Previous articleमिसनमा जाने सैनिकको तलब बढ्यो, अब कति पाउँछन् ?
Next article५ अर्ब २६ करोडमा संसद्को आफ्नै भवन